Shir dib u heshiisiin ah oo DFKG ku baaqdey bisha Juun 2011 • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Shir dib u heshiisiin ah oo DFKG ku baaqdey bisha Juun 2011
Tagged With: Farmaajo
Shir dib u heshiisiin ah oo DFKG ku baaqdey bisha Juun 2011
April 14, 2011 - By: Hanad Askar
Golaha xukuumadda kumeelgaarka ah ayaa shirkoodi caadiga ahaa oo ay ku yeesheen magaalada Muqdisho uga dooday arimo dhawr ah, waxaana ugu danbeyntii ay ka soo saareen qodobo ay uga hadlayaan dib u eegid ay ku sameeyeen Shirkii wadatashiga ahaa ee maalintii shalay lagu soo gebagebeeyey Nairobi, kaas oo ay ka soo baxeen talooyin dhawr ah, sidoo kale kulanka wasiirada ayaa looga hadley sidii ay u qaban lahaayeen shir dib u heshiisiin ah.
Kulanka wadatashiga ah ee ka dhacay Nairobi ayey ku tilmameen mid aan miro dhal ahayn isla markaana aysan ka soo bixin wixii la filaayey.
Golaha wasiirada ayaa isku raacey in wadatashi iyo xisaabtan dhab ah ay oggolyihiin in uu dhexmaro Dawladda iyo maamulada ka jira gobolada dalka iyo Ururka ahlu-sunnah.
Golaha ayaa isku raacay in shir dib u heshiisiin ah lagu qabto dalka gudihiisa iyada oo Dawladdu ay maamuleyso iyada oo la kaalmeysanaysa Beesha Caalamka!, waxaana shirkaas la qoondeeyey in uu dhaco 11 – 16 bisha Juun ee sanadkan.
Warsaxaafadeedkii xukuumadda ka soo baxay hoos ka akhri:
(Muqdisho – Khamiis, 14 April 2011)—–Shirkii caadiga ahaa ay Golaha Wasiiradu yeesheen maanta oo uu shir-guddoominayey Ra’iisul Wasaaraha Somalia Mudane Mohamed Abdullahi Mohamed ayaa waxaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin shirkii ka dhacay Nairobi iyo marxaladda kala guurka ah.
Golahu waxey dib-u-eegid ku sameeyeen kulankii wadatashiga ‘heerka sare’ ee ka dhacay Nairobi 12kii iyo 13kii April 2011. Kulankan ma noqon mid miro dhal ah oo buuxiya waxii laga filayey, mana aheyn mid matala danaha shacabka soomaaliyeed.
In Dowladda FKMG ah ay diyaar u tahay in wadatashi, isla xisaabtan iyo dib-uheshiisiin dhab ah ay dhex marto dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed, ha noqdaan Maamuladda Gobolada, Ahlu Sunna WalJameeca, ururada bulshada, madaxda dhaqanka iyo kuwa diinta iyo kooxaha ka soo horjeeda dowladda.
Guddiga siyaasadda ee heer wasiir ah inay ka soo talo bixiyaan habka ugu habboon ee shir Somalida isagu timaado waddanka gudihiisa isla markaana ay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo gudbiyaan Golaha Wasiiradda.
In agendaha, macluumaadka iyo qorshaha shirkan uu noqdo mid dhammaan ka qeybgalayaasha lagala tashto si uu u noqdo mid ay dhammaan ka qebygalayaasha isku raaceen. Golahu waxuu isku raacay in dhammaan qeybaha bulshada la gaaro oo lagala tashto ajendaha iyo waxa la filayo inay ka soo baxaan shirka. Shirkan ayaa noqon doona mid wadatashi siyaasadeed isla markaana looga hadlayo habka loo wajahayo mustaqbalka shacabka soomaaliyeed.
Axmed Madoobe ” Anigu weli waa taaganahay, sababtoo ah dariiq aan rabaa inaan ku baxo”